Radja Nainggolan Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta
Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Belgium Radja Nainggolan Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta ee ugu caansan oo loo yaqaan 'Nickname'; Ninja. Dabeecadeena Caruurta Nainggolan ee kudheerka ah iyo Xogta Aan Bixin Karin Xaqiiqooyinka ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku saabsantahay sheekadiisa noloshiisa ka hor warkeeda, nolosha qoyska iyo waxyaabo badan oo OFF iyo ON-Pitch oo aan run ahayn oo la yaqaan ee isaga ku saabsan.
Haa, qof walba waa ogyahay mid ka mid ah ciyaartoyda khadka dhexe ee ugu fiican Yurub, lakiin wax yar ayaa ka fakaraya Radiga Nainggolan 'Biography' oo ah mid xiiso badan. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, aynu bilaabi.
Radja Nainggolan Sheeko Xeeldheer Xogta Weriyeyaasha -Nolosha Hore
Radja Nainggolan waxay ku dhalatay 4th May 1988 ee Antwerp, Belgium. Waxa uu ku dhashay hooyadiisi danbe, Lizi Bogaerts Nainggolan iyo aabbe, Marius Nainggolan. Waxay u magacaabeen Radja taasoo macnaheedu yahay "King". Radga wuxuu ku dhashay mataano. Waxaa la sara kiciyey sadexda walaal ah iyo laba walaashood, oo la yiraahdo Riana Nainggolan. Hoos waxaa ku yaal sawirkooda caruurnimada.
Beljamka, wuxuu ku kiciyay qowmiyad Flemish ah laakiin wuxuu ku dhuftay asalkiisa Indonesia. By xididada, isagu waa Indooni ah ee Batak taariikhda iyo diinta, xubin ka mid ah Church ee Protestant Batak.
Radja waxaa wali la kiciyay Roomaan Katoolik oo ku hadla luqadaha Dutch, Ingiriisi iyo Talyaani, iyo sidoo kale fahamka Faransiiska. Sida ilmo yar, Radja wuxuu markhaati u yahay xidhiidh xumo dhexmara waalidkiis. Aabihiis ayaa si geesinimo leh ugu socday qoyskiisa, oo ka soo baxay Belgium iyo dib ugu soo laabtay ilaa Indonesia. Radja, walaalihiis iyo hooyadiis waa inay naftooda ku noolaadaan, iyagoo lacag la'aan ah. Ilmo kasta oo ku noolaa fasaxa waalidku wuxuu ogaan doonaa oo kaliya si aad u fiicnaan karta xanuunka qoto dheer ee uu keeni karo. Tani waxay saameyn xun ku yeelatay Radja. Saameyntu waxay si cad u saameyn ku yeelatay horumarkiisii ​​oo uu ku adkeystay intii uu socday caruurnimadiisii.
Radja iyo walaashiisa twin, Riana waxay dhiirigelisay dhiirigelinta hooyadeed si ay ugu tartanto kubada cagta iyadoo tixgelinaysa in mid kasta ama labadaba ay ku guuleysan karaan. Intaa ka badan, iyaga oo ogaanaya awooddooda iyo meesha ay ka yimaadeen, Lizi Nainggolan waxay kubada cagta u aragtay kubada si ay caruur uga dhigto saboolnimada.
Radja Nainggolan Sheeko Xeeldheer Xogta Weriyeyaasha -Xirfadda Soo-koobista
Radja ayaa kubada cagta bilaabay markii uu shan sano jirsaday. Iyadoo la wata walaashiisa, wuxuu bilaabay inuu ka ciyaaro Tubantia Borgehout, koox yar oo ka socota magaaladiisa. Markii uu da'diisu ahayd 10, wuxuu u guuray Germinal Beerschot, koox ka mid ah horyaalka heerka ugu sareeya ee Belgium. Taasi waxay ahayd markii uu ogaaday in kubbada cagta ay dhab ahaantii ahayd mustaqbal isaga iyo labadiisa nin ee quruxda badan. Si uu u helo nuqulo oo aanu niyadjabin hooyadiis, Radja marna ma joojin barashada. Labadiisii ​​iyo walaashiisii ​​labadaba, Riana waxay ahayd midka ugu sareeya ee fasalkooda.
Radja waxaa ku sugnaa Germinal Beerschot ilaa 2005, markii uu xusay Alessandro Beltrami oo ka caawiyay inuu u dhaqaaqo Serie B kooxda Piacenza si uu ugu soo gabagabeeyo mustaqbalkiisa ciyaareed. Ka dib markii uu dhalashadiisa dhaliyey, wuxuu u dallacsiiyay kooxdooda. 2010, wuxuu u wareegay Cagliari halkaas oo uu u ciyaaray seddex xilli oo ah doorasho aan la isku halleynin.
Bandhigyada uu la leeyahay Rossoblu wuxuu si gaar ah u jecel yahay taageerayaasha, isaga oo ku magacaabay liiska sare ee 11 oo ka kooban ciyaartoyda ugu fiican taariikhda kooxda Sardinia. Tani waxay keentay Roma inay tagto adeegyadiisa 2014. Inta kale, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
Radja Nainggolan Sheeko Xeeldheer Xogta Weriyeyaasha -Nolosha Xiriirka
Cagta waa dhirta dahabka ee Radja. Meeshii uu ka helay muuqaal iyo hoos isaga oo ka fogaanaya xaqiiqada murugada leh. Waxaa laga yaabaa, geedka kale ee dahabiga ah ee soo jiitay hadhuudh iyo kalsooni waa xaaskiisa xaaskiisa, Claudia.
Claudia Nainggolan Lai Sawirka hoose waa xaaska Radja Nainggolan. Waxay tahay mid fudud, dhulka hoos ku qoran iyo gabadh aad u qurux badan oo nostalgic ah nolosheeda maalin walba.
Waxay qeexeysaa sida ay ula kulantay Radga oo leh ..."Waxaan la kulmay Radja Cagliari waxayna ahayd jacaylkii ugu horreeyay. Markii aan bartay labo bilood ka dib markii uu ahaa ciyaaryahan, waxaan doonayay inaan iska dhiibo. Waan ogahay nolosha kubada cagtu waa mid mashquul ah, sidaasi darteed, waxay heystaan ​​jaceyl badan. Waqtigaas, waxaan ka shaqeynayay meherado dukaamaysan oo waqti buuxa ah, in yar oo aan wali ka maqnaado. Sida muruqyada sida uu u ekaa, waxaan dareemay xishood sida uu ii sheegay inuu i jecel yahay, la yaab leh sidoo kale marka hore aragga. Markii uu ii sheegay inuu ku socdo Rome ayaanan si fiican u qaadan. Roma, qof walba wuxuu u muuqdaa mid si fiican u labisan dharka, ka duwan Cagliari. Waxay igu qaadatay wakhti aan horay u soo dejiyey. Sannad ka dib, waxaan bilaabay inaan soo baxo kaamaro. Waxaan wali waayayaa inaan haysto noloshayda kowaad, halkaas oo aan ku lahaa xoriyad dheeraad ah oo aan wax u qabano. "
Claudia iyo Radja Nainggolan labadaba waxay go'aansadeen in ay xirxiraan 2011. Hoos waxaa ku qoran sawirkoodii arooska oo ka dhacay asal ahaan taariikhda cinwaanka cinwaanka Cinecittà World, xadiiqada madadaalada ee Castel Romano, Italy.
Guurkooda isla markiiba waxay u barakeeyeen midhaha ilma-galeenka. Aysha Nainggolan gabadhiisii ​​waxay ku dhalatay maalinta 30th ee Janaayo 2012.
Claudia waxay jeceshahay inay raacdo jacaylkeeda, Radja Nainggolan, oo ku taal caasimadda si ay ula socoto xiisad cusub oo ay la socdaan ilmahooda oo u muuqda in yar koray sawirka hoose.
Labada lamaane waxay arkeen xannibaadda xilliga dhimashada xitaa inta lagu jiro dibadbaxyada oo ay u gudbeen. Dhawaan, labadaan lamaane ayaa ku dhex maray dhowr murugo oo laga soo sheegay warbaahinta bulshada.
Bilayska talyaaniga ayaa xitaa maxkamad ku soo oogay Radja Nainggolan oo ah xadgudubyo, hanjabaado iyo rabshad lid ku ah xaaskiisa. Claudia. Nasiib wanaag, waxay isbeddeleen kala duwanaanshahooda.
Radja Nainggolan Sheeko Xeeldheer Xogta Weriyeyaasha -Nolosha Qoyska
Bilaabidda, Radja waxay ka heshay aabaheed Batak, Marianus Nainggolan oo ka soo jeeda Indonesia. Waa arrin ku xiran tahay in Radja Nainggloan ay ka timaaddo qoys sabool ah oo ay ugu mahadcelinayso aabihiis, Marius oo ka tagay waddankiisa, Indonesia oo rajeynaya in uu ka dhigo mid weyn oo Belgium ah oo kaliya si uu u noolaado noloshiisa wali ay ku adagtahay inuu ku dhex maro Belgium.
Tani waxay keentay Marianus Nainggolan inuu ku laabto Indonesia si uu u sii wado ganacsigiisa. Maanta shaqadiisa adag ayaa bixisay., Halka wiilkiisa iyo gabadhiisa ay ka dhigeen kubadda cagta, Marianus qudhiisu wuxuu noqday ganacsade ku yaala jasiiradda Bali.
Sidoo kale Piacenza Radja la midoobid aabihiis Sida ka duwan ciyaartoyda kale sida Deli Cali.
Xilligaan wuxuu dhacay 2007 aSanado badan oo 13 ah. "Ugu dambeyntii waannu kulmi doonaa. Papa wuxuu ka yimid Bali ilaa Italy si uu u arko aniga iyo Riana " ayaa sheegay in Radja oo aan waligiis dembiyadiisa aakhirkii ku hayin qalbigiisa.
Hooyo: Radja hooyadii waa asal ahaan asal ahaan Belgian. Ka hor intaanay guursan, waxaa markii hore loo yaqaan 'Lizi Bogaerts'. Liz waxay guursadeen Marius oo magaceeda ku beddelay Nainggolan. Nasiib darro, Lizi ayaa ku dhintay 2010, saddex sano ka dib markii ninkeedu uu ka soo laabtay. Ka dib dhimashadiisii, Radja wuxuu laba baalash oo dhaadheer ku daboolay taariikhdiisa dhalashadiisa iyo dhimashadiisa. Sida hoos ku aragtay. Xaqiiqdii, Radja ayaa dhabarkiisa dhabarka u saaran hooyadiis.
Hooyo: Riana Nainggolan waa mataanaha wayn ee walaalkeed twin, Radja. Waxay ku dhalatay maalin ka weyn kan walaalkeed ee Antwerp, May 3, 1988.
Sida hore loo sheegey, walaalkeed taariikhda dhalashada waa 4th May, 1988. Radja labada walaasheed, Riana Nainggolan, sida walaalkeed ayaa sidoo kale u ciyaara AS Roma ee haweenka kubadda cagta sida waqtiga qorista. Waxay sidoo kale sheekada sheekada ay u leedahay in ay ka tagto aabaheed oo mar waliba aaney ka tagin iyada oo kaliya laakiin qoyskeeda xaalado ammaan ah sida ilmo.
Ka hor inta uusan imaan Roma, Riana Nainggolan ayaa weli si firfircoon uga ciyaara naadiga kubadda cagta haweenka ee Belgium, Kontich. Waxay u keentay kooxdeeda si caan ah tartamada qaranka ee Belgium.
Walaal: Manuel Noboa sawir hoose waa walaalka badhkiis Radja Nainggolan. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga ogaado isaga waa xaqiiqda ah in Nabou waa Chelsea Fan.
Radja walaalkiis Manuel Noboa ayaa mar u sheegay saxaafadda; "Waxaan ku dhajiyay cod weyn oo aan iska cadahay waqtiyo badan oo walaalkay Radja, waa inuu tagaa Chelsea. Premier League waa jawiga ugu fiican ee dabeecadiisa. Nasiib darro, wuxuu jecel yahay Rome badan. "
Radja Nainggolan Sheeko Xeeldheer Xogta Weriyeyaasha -Xaqiiqooyinka Tattoo
Radja Nainggolan, Belgian leh xididdada Indonesian, waa, shaki la'aan, nin la yaab leh. Tan iyo markii uu yimid Roma ee 2014, nambarkiisa kubadda cagta ayaa sanad kasta kordhay. Ma ahan kaliya inuu u istaago ciyaarkiisa garoonka, laakiin muuqaalkiisa muuqaalkiisa iyo sawirada aan la tirin karin ee jirka oo dhan taas oo dhab ahaantii la timaado xanuun murugo leh.
Radja Nainggolan Sheeko Xeeldheer Xogta Weriyeyaasha -Tattoo Collection
Wareysiyo dhowr ah, wuxuu ku dhawaaqay in dhammaan tattoo uu leeyahay macnaheeda oo ay yihiin kuwo isaga u gaar ah, gaar ahaan kuwa loogu tala galay hooyadiis soo daahay.
Aside oo eegaya timihiisa, Haddii aan sameyno shaxanka sare ee Radja Nainggolan, waxaan helnaa Janno buuxa oo ah dhar-gooyooyin, qaar ka mid ah ayaa ku daboolay kuwo cusub, sida midka qoorta lagu akhriyo; "Bilowga" (Bilowga). Sidoo kale, taariikhda Roomaaniya oo uu ciyaaray kulankiisii ​​ugu horeeyay ee Piacenza waxaa lagu bedelay wadnaha wadnaha kaas oo qulqulaya luqada Belgian. Hoos eeg;
In badan oo muuqaal ah oo muuqaalka ah ee jidhka waa muuqaal xoog leh oo qoorta lagu saaro. Tani waa quruxda quruxda weyn.
Waxaa jira abeeso dheer oo ka ag maraya dharkiisa iyo inta u dhaxaysa uu leeyahay tattoo Ingiriisi ah: "Ku noolow adoon iska dhigin. Jacayl aan ku xirneyn. Dhageeyso adiga oo aan difaac lahayn. Hadal adigoon dembi galin ". Xagga sare ee masaska wuxuu leeyahay qoraalka soo socda: "Hal nolol, hal rajo" (hal nolol, hal wish).
Nainggolan waxay leedahay teendhooyin cagaaran oo ku yaal gacanta bidix iyo Buddha oo hoos ku qoran. Xagga sare ee teendhadu waa ubax badan. Waxay leedahay gabadhiisa koowaad "ALISA" on armaajada gacanta bidix iyo dhowr xiddigo. Gacan isku mid ah, wuxuu leeyahay magaca hooyadiis ee luqadda Elwish.
Dhawaan suulka, Radja waxaa ku jira lafo, mid leh lambarka 5 (Macnaha MAY, bishii uu dhashay) iyo kan kale, lambarka 4, (Macnaha, wuxuu ku dhashay maalinta 4th May). Waxa kale oo uu leeyahay qoraallo sheegaya in ... "Jecel yahay inaan ku guuleysto" (waxaan jeclahay inaan ku guuleysto) dhinaca bidixda. Gacanta midig, waxaa jira mid ka mid ah oo sheega ..."Necbahay in lumo" (Waan necbahay inaan lumiyo).
Radja waxay leedahay tattoo yar oo lugta ku jirta. Maqaarka midigta, wuxuu ku sawiray makarafoon leh xaraf iyo xarafaha RN4. In badan oo ka muuqata sawirka hoose waa masduulaagii cabsida barta bidixda.
Dibiga, wuxuu leeyahay naane 'ninja' oo leh lambarka 4. Gabadhiisa waxaa ku jira magaca walaashiisa twin ee Shiinaha iyo anqawga, astaamaha dollarka iyo "Las Vegas".
Lugta bidix waxaa ku jira sanduuq yar (dabo) iyo hore, seef ilbiriqsi ah.
Radja Nainggolan Sheeko Xeeldheer Xogta Weriyeyaasha -Naftaada Shaqsiga
Radja Nainggolan waxay leedahay astaamaha hoos ku qoran shakhsiyadiisa.
Awoodaha: Waxa uu yahay mid lagu kalsoonaan karo, bukaanka, wax ku ool ah, oo xasilan, inkastoo uu ka muuqdo muuqaalkiisa.
Tabar-darrada: Waxa uu noqon karaa madax adag, waxyaabo badan oo aan la qabsan karin.
Radja jecel yahay: Tattoos, oo leh timo muuqaal leh, beerta, muusikada, jacaylka, dharka tayo sare leh iyo gacmaheeda.
Waa maxay Radja Jeceshahay: Isbeddel deg-deg ah, dhibaatooyinka xiriirka, amni-darrada nooc kasta iyo dhar-dabeecadeed.
Si kooban, radja waa mid waxtar leh oo si fiican loo yaqaan. Isagu waa qof kii jecel yahay inuu soo ururiyo midhihii hawshiisa. Wuxuu dareensan yahay baahida loo qabo in lagu hareeriyo jacaylka iyo quruxda wuxuuna tixgeliyaa taabashada iyo dhadhanka ugu muhiimsan ee dareenada oo dhan. Nainggolan wuxuu diyaar u yahay inuu adkeeyo oo uu ku dhegto doorashadiisa ilaa uu gaaro heerka qanacsanaanta shakhsi ahaaneed.
Radja Nainggolan Sheeko Xeeldheer Xogta Weriyeyaasha -Sigaarka
Waxa kale oo uu si cad uga hadlay sigaarka sigaarka, isagoo sheegay in dhawaan ay hoos u dhacday macalinka xulka Belgium Roberto Martinez sababtoo ah caado.
'Ma xishoonayo sababtoo ah waxaan cabbay sigaarka, mana waligay qarsooneyn caanahaan,' Nainggolan ayaa u sheegay wariyeyaasha ka baxsan xerada tababarka Belgium. "Waan ogahay inaan jeclaan lahaa inaan tusaale fiican sameeyo, waxaan haystaa caruur ... Laakiin waxaan ahay kubadle, shaqadeyda waan qabanayaa. Qof kastaa wuu ogyahay in aan sigaar cabo, mana qarin karo, laakiin ma xishoodo.
Hubinta FACT Waad ku mahadsantahay akhrinta sheekada Radiga Nainggolan ee sheekada iyo xaqiiqda sawir la'aanta. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku habboonayn qodobkan, fadlan ku qor faalladaada ama nala soo xiriir!.
Roma Taariikhda Kubadda Cagta
Youri Tielemans Childhood Story Sheeko Xaqiiqooyin Wacan Lahaa
Thomas Meunier Hijradan Caruurnimada iyo Xaqiiqooyinka Aan Laheyn
Furi Origi Dabeecada Sheeko Xogta Wanaagsan
Adnan Januzaj Sheeko Waali ah Sheeko Xaqiiqo ah
Axel Witsel Cartheel Story Sheeko Xaqiiqo Weedheer
Dries Mertens Childhood Story Sheekooyin Xaqiiqooyin Wada-hadal ah
Toby Alderweireld Sheeko dhalinyaro sheeko dheeri ah Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography'
Sheekada Carruurnimada Mousa Dembele iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
Jan Vertonghen Sheeko dhalasho sheeko dheeri ah Xogta loo yaqaan 'Biography'
Thibaut Courtois Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
Kevin De Bruyne Sheeko dhalasho sheeko xeel dheer
Eden Hazard Childhood Story Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-hadalada